Waxaa isa soo taraya walaaca waalidiin badan oo daggan dalka Maraykanka ay ka qabaan dib ugu noqoshada iskuulada ee sanad dugsiyeedka 2021-2022 kuwaasoo badankood furmaya toddobaadka soo aaddan (August 23, 2021) iyadoo ay sii kordheyso tirada dadka uu dhacayo xanuunka COVID-19, gaar ahaan faraciisa Delta.
Inta badan iskuulada ayaa lagu wadaa inay noqdaan kuwa ay ardaydau toos u dhigtaan. Arrintan ayaana walaac ku abuurtay waalidiinta dhalay ardayda ay da’doodu ka yar tahay 12 jirka kuwaasoo aan wali loo helin talaal lagaga hortago COVID-19.
Haddaba, Prof. Maxamed Saalax Sh. Khaliif oo bare ka ah jaamacadda Ohio state university, ahna abaabiye muddo dheer ku dhex jiray wasaaradda waxbarashada ee gobolka Ohio qaybna ka geystay furista iskuulo loo furay bulshda soomaalida ayaa ka jawaabaya su’aalo ku saabsan dib u furista iskuulada, sida uu noqonayo qaabka fasaslka dhexdiisa, iyo waajibaadka ka saaran waalidiinta inay kaalintooda ka qaataan ilaalinta caafimaadka carruurtooda.
Caasho Ibrahim Aden (Caashocuud) oo kula xiriirtay khadka taleefanka ee magaalada Columbus ayuu u warramay Prof. Maxamed.
Dhageyso Wareysiga Prof. Maxamed Saalax Sh. Khaliif